Kedu ihe ngwaọrụ ndị a ga-eji mee nchọpụta maka nchịkọta nke Amazon?
Nnyocha nchịkọta bụ ụzọ dị ịrịba ama nke mgbasa ozi njikarịcha search engine nke Amazon. Ịnweta ohere ịchọtara na ọchụchọ ọchụchọ Amazon gị nwere ike imelite ego gị ma melite ngwaahịa gị.
O nwere ike ịbụ na ị hụla nchịkọta ngwaahịa ndị kachasị mma nke na-agụnye ọtụtụ ozi na-adịghị mkpa na Amazon.Otú ọ dị, ọ dị anyị mkpa ikweta na ngwaahịa ndị a nwere ọkwa dị elu na saịtị ọchụchọ ọchụchọ Amazon. I nwere ike ịjụ ihe mere ndị ọrụ jiri pịa ntanetị anya na-azụta ihe ndị a. N'ikwu eziokwu, ndị ọrụ adịghị adịka ụdị utu aha ndị ahụ, ma Amazon algorithm na-achọta ha dị mkpa na nkọwa - certificacion php gratis. Ọ bụ ya mere ị ga - eji nwee utu aha ndị dị na TOP Amazon. Ndị ahịa na-ere ahịa ugbu a bụ ndị na-eji ogologo aha ndị a mara otú Amazon A9 algorithm si arụ ọrụ. Ndị ọrụ ahịa kachasị mma ndị na-ere ahịa n'ịntanetị na-eme nchọpụta nyocha iji chọpụta kpọmkwem okwu ọchụchọ ha chọrọ iji kwụsị. Site na ngwá ọrụ ihe nchọpụta Amazon pụrụ iche, ha na-achọpụta nchịkọta ọchụchọ nke isiokwu ndị ahụ ga-achọpụta ma jikọta ọdịiche dị iche iche na Mpịakọta Mbụ, Nkọwapụta, Isi Ihe Ejiri, Ajụjụ Ndị A Na-ajụkarị, Nzaghachi, ọbụna foto.
N'isiokwu a, anyị ga-atụle ihe ngwaọrụ ị nwere ike iji iji chọta ọchụchọ ọchụchọ kachasị mkpa maka ngwaahịa gị, na otu esi enyere gị aka ịkwalite ọkwa na ahịa gị.Ya mere, ka anyị lebakwuo anya na ngwá ọrụ ọkachamara na atụmatụ dị irè ịchọta isiokwu zuru oke maka azụmahịa gị n'ịntanetị.
Nkọwa okwu Amazon na ngwaọrụ
Google's Keyword Planner bụ ọkachamara isiokwu nchịkọta isiokwu. dị maka ndị na-ege ntị. Ọ bụ n'efu na onye ọrụ enyi. Ọzọkwa, ọ na-enye nkọwa kachasị mma. Ngwá ọrụ a nwere ike inyere gị aka ịchọpụta nchịkọta ọchụchọ maka mkpụrụokwu ọbụla na ahịrịokwu okwu. Ọzọkwa, ọ na-enye gị ohere ịchọta mkpụrụokwu ndị ọzọ metụtara ya. Kwa oge Google nakọtara data na terabytes, ọ bụ ya mere Google Resource Planner bụ ebe ị nwere ike ịnweta ọnụ ọgụgụ zuru oke nke ole ọchụchọ a nyere okwu ma ọ bụ ahịrịokwu. Ị nwere ike imechi ọchụchọ gị site na mpaghara na ọnọdụ ndị na-ege ntị (afọ, okike, wdg. ). Ọ bara uru karịsịa ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịkwalite ngwaahịa gị na Amazon ma ọ bụ ntanetịzụ ahịa ọzọ.
Iji malite iji Google Planner, ị ghaghị ịmepụta akaụntụ AdWords n'efu. Ozugbo ịnwere akaụntụ gị, ị ga-ahụ Isiokwu Planner n'okpuru Ngwaọrụ taabụ. N'ebe a, ị nwere ike ịmalite ọchụchọ gị na ụfọdụ isi okwu ma jiri nwayọ gaa na usoro ọchụchọ ogologo nke ndị ọrụ na-achọ. Iji mezuo ọrụ a, ịkwesịrị ịmeghe "Chọta isiokwu ọhụrụ ma nweta mpaghara data ntinye ọchụchọ" ma tinye mkpụrụedemede gị ezubere iche n'ime "Ngwaahịa gị ma ọ bụ ọrụ". N'ikpeazụ, pịa bọtịnụ "Nweta echiche". N'ihi ya, ị ga-enweta ndepụta nke isiokwu ndị metụtara ya. Otú ọ dị, ị ga-achọ ijide n'aka na ịchọrọ site na Okwu echiche, ọ bụghị site na Adgroup echiche.
Google Keyword Planner ga-enye gị nkezi nyocha kwa ọnwa maka isiokwu ndị metụtara ya. Olu ọchụchọ dị na Amazon nwere ike iche na data ị ga-enweta na GKP. Otú ọ dị, data ndị a ga-adịtụ otu, nke na-enyere gị aka ịchọpụta nke isiokwu ga-enweta gị ọtụtụ okporo ụzọ na Amazon.
Nkọwa zuru ezu nke ihe ndị ọzọ ịchọtara ihe omimi nke Amazon nwere ike ịchọta na ajụjụ gbasara azịza na azịza .